အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံမူတွေကို ထ… – PVTV Myanmar
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံမူတွေကို ထ…
·9months ago ·11 Comments
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံမူတွေကို ထုတ်ပြန်ကြေညာ
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံမူတွေကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီအခြေခံမူတွေထဲမှာ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် ကိုက်ညီခြင်း၊ ဦးဆောင်မှု၊ ကာကွယ်ရေး ကဏ္ဍအပေါ် ဥပဒေပြုအာဏာမှကွပ်ကဲမှု၊ ကာကွယ်ရေး ကဏ္ဍအပေါ် တရားစီရင်ရေးအာဏာမှကွပ်ကဲမှု၊ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ နိုင်ငံတကာမှလက်ခံထားသော ဥပဒေများနှင့် ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာခြင်း၊ ရာထူးတာဝန်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ဘဏ္ဍာရေးစီမံမှုနှင့် အရင်းအမြစ်ခွဲ‌ဝေမှုနဲ့ နိုင်ငံတကာနှင့် ထိရောက်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစတဲ့ အခြေခံမူများ ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့်ကိုက်ညီခြင်းဆိုတဲ့ အပိုဒ်မှာ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေဟာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ချမှတ်တဲ့ နိုင်ငံရေးမူဝါဒအတိုင်းသာ ဖော်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီရမဲ့အချက်နဲ့ တန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တည်းဟူသော ဖက်ဒရယ်တန်ဖိုးများနဲ့ ကိုက်ညီရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍမှာဆိုရင်လည်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့ ဒုတိယဝန်ကြီးတွေဟာ အရပ်သားတွေဖြစ်ရမယ်လို့ ပါရှိသလို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟာ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေအရ တပ်မတော်ကို ဦးဆောင်မှာဖြစ်သလို အစိုးရရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးကောင်စီကို ဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီမူဝါဒထဲမှာ စစ်သေနာပတိဟာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက အဆိုပြုအဆိုပြုတဲ့သူကို လူမျိုးဘာသာခွဲခြားမှုမရှိပဲ စစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ရမယ်လို့လည်း ပါရှိပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်း အရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ ကွပ်ကဲမှုရှိရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
စစ်တပ်အနေနဲ့ အရပ်သားတွေအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေကို အရပ်ဘက်တရားရုံးတွေမှာသာ စစ်ဆေးစီရင်ရမယ်လို့ ဆိုထားသလို စစ်ဘက်က လုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာ ပြည်သူလူထုအပေါ် နစ်နာတယ်လို့ သံသယရှိတယ်ဆိုရင် စစ်ခုံရုံးကစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမယ့်အပြင် အရပ်ဘက်တရားရုံးကလည်း စစ်ဆေးအရေးအယူခွင့်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နောက်ပြီး ပြည်ထောင်စုရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ နိုင်ငံတကာ စစ်ဥပဒေတွေကို တိကျစွာလိုက်နာရမှာဖြစ်သလို စစ်မြေပြင်မှာလည်း ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကို လေးစားလိုက်နာရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ရာထူးနဲ့ တာဝန်တွေကို သတ်မှတ်ရာမှာ လူမျိုးဘာသာအရ ခွဲခြားမှုမရှိစေဖို့နဲ့ ကျား/မခွဲခြားမှုမရှိစေဖို့ ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ စီမံရမယ်လို့လည်း ပါရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံမူအပြည့်အစုံကို National Unity Government of Myanmar ဖေ့စ်ဘုတ်ပေ့ချ်မှာ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Like – 6.2K Share – 637
2021-05-07 at 5:02 PM
2021-05-07 at 5:09 PM
Io Deimos says:
2021-05-07 at 5:18 PM
I am very impressive with the people of Myanmar fighting the terrorist-mafia Tatmadaw using briiliance, legal means, and leadership with the people. You are truly worthy of respect, love and support. I believe you will win. You will. I love you all
သိင်္ဂါထွန်း ဒဿနိက says:
2021-05-07 at 5:22 PM
လူတိုင်း လက်နက် ကိုင်နိုက်ရင်ဖြင့် ပြောမနေနဲ့တော့
Hlaingmg Mgxtun says:
2021-05-07 at 5:43 PM
Zaira Lay says:
2021-05-07 at 6:08 PM
2021-05-07 at 8:21 PM
2021-05-07 at 10:47 PM
2021-05-09 at 5:07 AM
2021-05-09 at 12:24 PM
“ဆရာ/ ဆရာမတွေ မကြောက်ကြပါဘူး။ အံ့သြစရာပါပဲ၊ ဒီတစ်ခေါက်အလုပ်ထုတ်ခံရတယ်ဆိုတာ၊ ဆရာ/…
True History, New History_Music Video (May 7/2021)